आज अमेरिकी डलरसहित सबै देशको भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् … – PanchKhal Online
Home/समाचार/आज अमेरिकी डलरसहित सबै देशको भाउ बढ्यो, कुन देशको कति ? हेर्नुहोस् …
काठमाडौं । आज मंगलबार अमेरिकी डलरसहित प्राय सबै देशको भाउ बढेको छ । आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ। हिजो डलरको विनिमयदर ११३ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको थियो ।
त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १३८ रुपैयाँ २ पैसा र बिक्रिदर १३८ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ।
युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ २९ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कुवेती दिनाार एकको खरिदर ३७४ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३७६ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ। बहराईन दिनार एकको खरिददर ३०२ रुपैयाँ ३८ पैसा तथा बिक्रिदर ३०३ रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ।
तालिकामा हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य देशको विनिमयदर
सानो घर, एउटा साइकल, सामान्य जीवनशैली अंगालेका नागरिक जसले अर्बपतिलाई चुनावमा हराए !
रवि लामिछानेलाई पाँच दिन थु नामा राख्न अदालतले दियो आदेश